Dagaalka Tukaraq: Labo nin oo bidaar leh oo shanlo ku dagaalamaysa! - Caasimada Online
Home Maqaalo Dagaalka Tukaraq: Labo nin oo bidaar leh oo shanlo ku dagaalamaysa!
In dadka Puntland iyo Somaliland labaduba isku taariikh yihiin, dhibaatooyin gaar ahna ay soo wada arkeen.
In waxa ka dhexeeya labadaasi bulsho iyo deegaan ay ka badan yihiin waxa kala qaybiya,
In xiriir bulsho, mid dhaqaale iyo mid deegaanba ka dhexeeyo labada bulsho,
In labadaas deegaan ay ka jirto maamul iyo xasilooni la isku halayn karo,
In dadka deegaamadaasi ay ka gudbeed marxaladihii dagaalada Sokeeye una gudbeen mid horumarineed iyo maamul wanaag.
In deegaamadaani ay ka jirto horumar daro baahsan iyo maqnaansho maamul oo ay dadka deegaanku raalina isaga yihiin,
In laga bilaabo Tukaraq ilaa Oog aan ku soo arkay rag wada hubaysan oo nin iyo qori ah, halka Puntland iyo Somaliland dhulka ay ka taliyaana aadan ku arkay qof qori wata ciidan mooyee.
In kantaroolada Gobolka Sool askarta iyo saraakhiisha joogta ay u badnaayeen dad aan deegaamada u dhalan,
Iyo in deegaamadaani ay hardinayaan (front) goob dagaalna ay u tahay labada maamul ee hareeraha ka xiga.
Somaliland oo istustay hadii Sool iyo Sanaag loo aqoonsado inay ka mid yihiin Puntland, aysan gaari doonin hadafkooda goosasho, sidaa awgeed maadaama shacabka reer Sool, Cayn iyo Sanaag aysan kalsooni ka haysan inay awood ciidan u adeegsato.
Puntland oo aaminsan in Masuuliyad ay ka saaran tahay difaaca deegaamadan maadaama dadka deegaamadaani ay wax ka dhisteen Puntland kuna hayb yihiin, dhulka la qabsadayna aan laga qabsan beel balse laga qabsaday Maamulka Puntland.
Shidaalka Ceelka Hol-Hol oo Somaliland ay heshiisyo kula gashay shirkado Scandinavian ah, taasina ay ku keliftay inay bixin dhaqaale iyo adeegsi ciidanba u isticmaasho sidii uu gacantooda u soo geli lahaa
Muuse Biixi oo isku arka Hogaamiye adag oo gaari kara wixii madaxdii ka horaysay ay ka gaabiyeen taas oo ah inuu soo xiro xuduudihii guumaysigu dhigay, dagaalkana u isticmaalo inuu ku mideeyo beeshiisa maadaama ay jiraan beelo uusan kalsooni ka haysan sida Garxajis (Habar Yoonis) oo kale. (war instigated by a country’s leader in order to distract its population from their own domestic strife).
Puntland oo u arkay ihaano in ciidan la soo duldhigo Caasimadoodii, aaminsana inay dulqaad badan muujiyeen kadib markii Provocations (daandaansi) badan oo hore lagu sameeyay, qabsashada Tukaraqna ay ka dhigan tahay khadkii casaaso in la soo dhaafay.
Reer Sool oo aaminsanaa in maamulka Puntland ay gabtay difaacii iyo hiilkii ay ka filayeen, laakiin kadib markii dagaalkii bilowdayna si aan kala har lahayn u taageeray colaadaasi kuna soo biiray dhinaca Puntland.
Hadalada dareenka qabyaaladeed xanbaarsan, goodinta iyo xusuusinta taariikh hore ee ka soo baxayay Muuse Biixi iyo Faisal Cali Waraabe afkooda oo (rally point) ama wax ay ka dhiidhiyeen ama mideeyay Reer Puntland iyo inta dareenka wada dhalasho la qabta noqday.
Dilal loo gaystay dad reer Sool ah sida Nabadoonkii Jaamac Siyaad ee gaadhiga lagu marsiiyay Hargaisa oo iyaduna sii hurisay colaada.
Cabdiweli Gaas oo mudo lix bilood ah diidadanaa inuu ciidanka Puntland u ogolaado dagaal oo aakhrikii si cadho iyo caadifad leh u oglaaday una arka in dagaalkani mid xaq ah yahay. (lagana yaabee in latayiyaashiisu ku qanciyaan inuu sii wado colaada si dalka uu xaalad degdeg ah ugeliyo, taasina kalifto doorashadii Puntland inay dib u dhacdo sidaana uu mudo korarsi ku helo).
Waxaa hubaal ah in dagaalkaani uusan noqonayn mid sahal lagu kala adkaado maadaama aysan Soomaalidu dhaqan iyo taariikhba u lahayn in qolo gaar ah laga adkaado, walow dagaalkani xiiso iyo xamaasad gaar ah uu dadka qaar u leeyahay oo hadii beesha Dhulbahante gebi ahaanba taageerto dhinac Puntland uu dagaalkani waji kale yeelan doono.
Sidoo kale dagaalkani masii socon doono maadaama aysan labada maamul heli karin saad, sahay iyo saanad ay kusii wadi karaan colaadaa daba dheeraata, (walow ay jiraan qolooyin labada dhinacba isku soo hubeeyay oo midkasta saanad soo siiya , saaxiibna ay u haystaan balse ula jeedadodu tahay Soomaali isku jebi)….!
Duruufaha dhaqaale ee ka jira labada maamul oo aan iyaduna u saamixi doonin sii hurinta colaadan. Dagaal waa marshuuc lagalo kan ugu qaalisan nimaan aqoon ayaana ku degdega: (bal eeg Saudi Arabia iyo Imaaraadka, dagaalkii Yemen dhibaatada dhaqaale xumo oo uu dhaxalsiiyay, waataa maanta ay canshuur ku soo rogeen shacabkodii, dadkii investment (maalgashiga) ku samaysan jirayna ka yaaceen).
Labada maamul oo midba midka kale uusan ka maarmin, isku socodka dadka iyo hantida ka helo dhaqaale badan oo hadii uu Meesha ka baxo labada dekadood ee Boosaaso iyo Berbera dhib u soo jiidi kara. (Bagaashka, Qudaarta, iyo Xoolaha Puntland ka yimaadaan ama soo maraan waxay tagaan Somaliland, halka Raashinka iyo badeecadaha kale ee Somaliland ka yimaadana loo iib geeyo Puntland ama ay maraan Puntland una sii gudbaan Koonfurta dalka).
Somaliland waa inay isticmaashaa caqli, oo dhibkii ay ka cabanayeen in loo gaystay mid la mid ah aysan kudayin reer Sool iyagoo u dowladaynaya, ogaadaana in dadka reer Sool aysan ka raali ahayn gooni isutaag.